Waxqabadka ODM - Shirkadda Wonderful Co., Ltd.
Dharka LED & Qalabka
Xisbiyada Xisbiga LED
Khibrad Khibrad leh
In ka badan 300 jeer khibrad wada shaqeyn guul leh leh sumcado adduunka laga yaqaan.
20 Sano oo beerasho deg deg ah warshadan, iyo qaybo badan oo tixraac horumarineed ah.
Kooxda R & D waxay ka kooban yihiin in kabadan 20 cilmi baarayaal suuq ah, tijaabiyayaal wax soo saar, naqshadeeyayaasha garaafka, naqshadayaasha qaabdhismeedka iyo injineerada elektarooniga ah.
Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay koox iib ah oo sare. Iyagu aad bay xirfad u leeyihiin waxayna macaamiisha u keeni karaan khibrad wanaagsan oo xagga isticmaalka ah.
BSCI, ICTI, ISO, SQA, kormeerka warshadda Coca-Cola, iwm.
20 sano oo wax soo saar iyo khibrad naqshadeyn ah oo ku saabsan xisbiyada yurub iyo Ameerika, qaabka iyo naqshadeynta shaqadu waxay la socon karaan laxanka suuqa.
Miisaanka xulashada maaddada
Samee iskaashi muddo dheer ah iyo xiriir lala yeesho alaab-qeybiyeyaasha si loo yareeyo kharashka wax soo saarka.
waxaan leenahay nidaam wax soo saar aan iin lahayn, nidaamka wax iibsiga, nidaamka xakamaynta maaddada iyo nidaamka tayada.
Waxaan u adeegsannaa shahaadooyin tayo badan oo alaab ah ama shuruudaha macaamiisha ee baaritaanka iyo tijaabinta.
Xigasho Degdeg ah
Xigasho sax ah 20 ama 30 daqiiqo.
Nidaamka cadeynta degdega ah
Kooxda mashruuca gaarka ah ayaa dabagal ku sameeya, jawaab celinta wax soo saarka Axadda.
3 maalmood si loo xaqiijiyo soo jeedinta mashruuca iyo oraahda. 10-maalmood adeeg cadeyn si looga caawiyo horumarinta wax soo saarka cusub.
Nidaamka adeegga hal-joogsi
Adeeg hal-joogsi ah oo laga bilaabo qalabka illaa alaabada.
Nidaamka Ilaalinta Hantida Maskaxda
Saxeex heshiis qarsoodi ah, qarsoodi saddex sawir ah iyo dukumiintiyo.
Nidaamka iibinta guryaha kadib
7 maalmood soo celin bilaash ah iyo isdhaafsi, 12 bilood oo tayo leh.
SII ADEEGYADA AASAASIGA AH EE
MAGAALADA SOO SOCDA
20 sano oo beerasho deg deg ah, macaamiisha ku taageera inay ka baaraandegaan muunadaha iyo qalabka
Animation, madadaalo, filim iyo ogeysiisyada telefishanka
Ganacsatada e-ganacsiga e-ganacsiga xorta ah
Muuqaal cusub oo tijaabo ah oo wax soo saar ah
Nooca IP-ga ah
Macdanta bilowga ah
Goobta isku xirka xuduudaha ee xuduudaha
Ma ii sheegi kartaa saacadahaaga shaqada?
Isniinta ilaa Jimcaha 9: 00-18: 00; xiran Axadaha iyo ciidaha qaranka.
Magaca weyn ee OEMs ee uu leeyahay iFlash House?
Kooxda horumarinta "Islam House" waxay si qoto dheer ugu lug leeyihiin suuqyada Mareykanka iyo Yurub, waxayna sii wadayaan inay macaamiisha siiyaan alaabooyin cusub oo la yaab leh oo qaas ah (walxaha qarxa), kuwaas oo si guul leh loogu iibiyo Mareykanka, Yurub iyo Japan. Martida ugu weyn waxaa ka mid ah Disney (oo ay ku jiraan US / France / Japan / China Hong Kong / China Shanghai Disney), American Wal-Mart / PartyCity / DOLLAR TREE / CVS, German PeARL, French Carrefour iyo Japan.
Ma sameyn karaa shaybaar alaabtaada ah?
Badeecadaha badankood waa la tijaabin karaa, badeecadaha qaarna waa la dalban karaa oo keliya wareegga wax soo saarka iyo qalabka ka dib. Waxaad sidoo kale tixraaci kartaa badeecadaheena jira. Lacag muunad qaas ah ayaa lagaa qaadayaa alaabada la habeeyay. Wixii faahfaahin ah, fadlan la tasho shaqaalaheena (0755-8237428).
Alaabtaadu damaanad qaadi kartaa tayada?
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku hawlanayd horumarinta iyo cilmi-baarista alaabada iftiinka u ah xafladaha iyo xafladaha, waxayna leedahay faham qoto dheer oo ku saabsan alaabada iftiinka leh. Shirkaddu waxay leedahay naqshadeeyayaal takhasus leh, dokumentiyo iyo kormeerayaal si adag u xakameeya tayada wax soo saarka. Hagaajinta habka wax soo saarka la safeeyey, ku shaqee si adag iyadoo la raacayo shuruudaha shahaadada nidaamka maareynta tayada qaranka, isticmaal shahaado tayo badan oo alaab ah ama shuruudaha macaamiisha ee baaritaanka iyo tijaabinta, iyo dhamaan badeecadaha waxay isticmaalaan agabyada shahaadada deegaanka ee ROHS, oo buuxiya shuruudaha ilaalinta deegaanka ee caalamiga ah
Aaway cinwaankii IFlash House?
Markaad gasho bogga "Love Flash House", booqashadaadu waa taageeradayada ugu weyn, waxaanan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa booqashadaada!
Hoolka Carwada Carwada Jacaylka: Shenzhen Runde Fengshilai Co., Ltd., oo ku taal dabaqa 14-aad ee Dhismaha Yongtong, Wadada Waqooyiga ee Renmin, Degmada Luohu, Shenzhen;
Saldhigga wax soo saarka: Shenzhen Nuowei Te Electronics Co., Ltd., oo ku taal 200-1 Lianxin Road, Wulian Zhugu, Degmada Longgang, Shenzhen;
Gaadiid ku habboon, booqashada iyo kormeerka ku habboon!
Ma warshad baa mise waa shirkad ganacsi?
"Love Flash House" waa summad xisbiyeed firaaqo oo asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka, waana badeecad hal joogsi ah oo alaabada ciidaha iyo nalalka xafladaha lagu iibiyo! Waxaa la aasaasay 2006 waxayna ku taal Degmada Longgang, Shenzhen, waa qeyb-joojiye alaab iftiimaya muddo 13 sano ah. Shirkadeenu waxay leedahay warshad u gaar ah iyo qalab wax soo saar oo horumarsan, in ka badan 4,000 oo mitir murabac oo ah meel wax soo saarka caadiga ah, iyo kooxdeeda R&D iyo wax soo saar. Badeecad kasta oo la soo saaray waxay soo martay tijaabo adag oo tayo leh. Taageerada processing OEM, processing ODM, processing la sawiro, processing la baarka iyo qalabka.
Shenzhen rundefeng Warshadaha CO., LTD
Cinwaanka Hoolka Bandhigga: Dabaqa 14aad, Block A, Dhismaha Yongtong, 3146 Renmin North Road
Khadka tooska ah ee latalinta 86-755-82374286
Right Xuquuqda daabacaadda - 2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Alaabada Kulul - Khariidadda bogga